Nhoroondo yekambani - HEBEI ORIENT IMPORT & EXPORT CO., LTD
ORIENTMED yakavambwa muna 1991. Isu tiri kambani ine hunyanzvi inonyanya kuita zvigadzirwa zvekurapa. Kubva pamhando yepamusoro uye nemitengo inonzwisisika, takakunda mukurumbira mumatunhu akasiyana siyana, seGerman, France, Kazakhstan, Russia, Kuwait, Australia, South Africa, United States zvichingodaro.
Zvese zvigadzirwa zvedu zvakagamuchirwa nezvitupa zveEC, ISO, FDA zvakateerana.
Zvigadzirwa zvedu zvikuru zvinosanganisira zvinotevera:
Disposable sirinji: Yakagadzirirwa sirinji, hypodermic tsono, yekumisikidza seti, yemusoro tsinga seti, IV cannula, ropa lancet, scalpel, vacuum ropa rekuunganidza chubhu, masaga eropa, weti masaga.
Disposable Magorovhosi Chipfeko: senge latex magurovhosi, nitrile magiravhusi, vinyl magurovhosi uye PE magurovhosi.
Disposable asiri dzakarukwa zvigadzirwa: senge kumeso kumeso, bhutsu yekuvhara, Mob kapu, Bouffant nguwani, chiremba wekuvhiya, gown, drape, bed pads, under pads, sleeve etc.
Kupfeka kwechiremba: kusanganisira bhanhire rakanamatira, mabhandeji akabatana, PE, asina-kurukwa uye Zinc oxide matepi, ronda plaster, plaster nezvimwe.
Rehabilitation Therapy inopa: senge yemagetsi vhiri cheya, aruminiyamu wheelchair, simbi wheelchair, commode wheelchair, commode, enda-ngoro, crutch uye tsvimbo etc.
Chirwere test kits: seyamuedzo wepamuviri, kuyedza ovulation, HIV, HAV, HCV, Malaria, H-pylori, nezvimwe.
Mazino kit: Kusanganisira sirinji yemazino, chikepe chinosimudza mate, simba rinopera zvakapetwa kaviri, kuongorora kwemazino kwakapetwa, stomatoscope nezvimwe.
Zvigadzirwa zvevakadzi: senge vaginal speculum, swab, urinary swab, cervix brush plush, cervical spoon, cervical rambrush, endometrial suction curette, cervical spatula, matanda spatula, gynecological kits.
Zvigadzirwa zvemishonga: senge Ropa kumanikidza kuongorora, Glucose mita, huma uye Dhijitari thermoeter, Fingertip oxymeter, Otomatiki sipo yekuparadzira.
Isu tanga tichitarisa kune yepamusoro mhando uye kugadzirwa maitiro eedu nhumbi kubva pakutanga kwekumisikidza hukama hwebhizinesi nevatengi vedu munyika. Ticharamba tichiwedzera kuita kuti sevhisi yedu ive nani uye isu tiri kutarisira kuumba hukama hwakavimbika nevamwe vatengi mumutsara wezvinoraswa zvigadzirwa zvekurapa munguva pfupi iri kutevera.
Kuve rakanakisa bhizinesi iro rese vatengi kuvimba uye tsvimbo vanoda!
Kubatsira tsvimbo kukura uye kushanda pamwechete kugadzira kubwinya!
Maitiro: hutano, kuzvivimba, kuvimbika, kugovana, kuonga! Chiito: basa, kugona, kubatana, chishuwo, uye kuhwina-kuhwina!